Wasiirka arrimaha gudaha oo qado sharaf u sameeyay saraakiisha Booliiska+sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka arrimaha gudaha oo qado sharaf u sameeyay saraakiisha Booliiska+sawirro.
Wasiirka arrimaha gudaha oo qado sharaf u sameeyay saraakiisha Booliiska+sawirro.
Sidoo kale, Taliyaha Ciidanka Boliiska oo isna joobta joogay ayaa Soo dhaweeyay, una mahadceliyay Wasiirka. Intaa kadib, ayeey carruurtu Soo bandhigeen fankooda, waxaana markiiba loo dhaqaaqay in waftiga lagu Soo warejiyo qeybaha, hooyga, waxbarashada iyo dhamaan laamaha haqab tirka Xarunta Barbaarinta caruurta.
Previous articleIsbitaalka xoogga dalka oo tayadiisa lasii horumarinayo+sawirro.
Next articleFaransiiska oo wadatashi ugu yeertay Safiirkiisa dalka Turkiga.
Wasaaradda caafimaadka XFS oo soo gabo-gabeysay shir looga hadlayay qorshaha nafaqada ee 2021/2022.
Ra’iisul wasaare Rooble oo xaflad sagootin ah loogu qabtay Baydhabo+(SAWIRRO).
Wasaaradda caafimaadka XFS oo soo gabo-gabeysay shir looga hadlayay qorshaha nafaqada...